China Deep Groove Bhora Bearing vagadziri uye vatengesi |Xinri
● Deep groove ball ndechimwe chezvinonyanya kushandiswa zvakanyanya.
● Kudzikira kuderera, kukurumidza kukurumidza.
● Chimiro chiri nyore, chiri nyore kushandisa.
● Inoshandiswa kugearbox, chiridzwa nemamita, mota, mudziyo wemumba, injini yekupisa mukati, mota yemotokari, michina yekurima, michina yekuvaka, michina yekuvaka, roller skates, bhora reyo-yo, nezvimwe.
Deep groove ball bearings ndiyo inonyanya kushandiswa kubereka mhando uye inonyanya kuenderana.Dzine kukweshera kwakaderera uye dzakagadziridzwa kune yakaderera ruzha uye yakaderera vibration iyo inogonesa kumhanya kwepamusoro kutenderera.Ivo vanogashira radial uye axial mitoro mumativi ese, iri nyore kukwira, uye inoda kushoma kugadzirisa pane mamwe marudzi anotakura.
Deep groove ball bearing ine chimiro chakareruka, chiri nyore kushandisa, ndiyo yakakura kwazvo kugadzirwa uye ndiyo inonyanya kushandiswa mhando yemabhengi.Rudzi urwu rwemabhengi anonyanya kushandiswa kutakura radial mutoro, zvakare anogona kutora imwe huwandu hweaxial mutoro.Kana kutakura radial clearance inowedzera, ine basa reangular contact ball bearings sehombe axial load.Cyakaenzana nehukuru hwakafanana hwemamwe marudzi, akadai ane diki friction coefficient, high limit speed.
● Kukweshana kwakaderera uye tembiricha inomhanya, ruzha rwakaderera uye kutenheka
● Kumhanya kwepamusoro
● Hunhu hwepamusoro uye kugona kuita kwechishandiso chako
● Anowanikwa nemhando dzemagirizi pazvimiro zvakawanda, anosanganisira girizi yemhando yechikafu, girizi yekupisa yakanyanya uye Solid Oil.
● Kuwedzera kuvimbika uye kupa hupenyu hurefu hwekutakura uye lubricant sevhisi
Deep groove ball bearing inogona kushandiswa kutapurirana, zviridzwa, michina yemagetsi, midziyo yemagetsi yemumba, injini dzinopisa mukati, mota dzekufambisa.
Michina yekurima, michina yekuvaka, mainjiniya einjiniya, nezvimwe.
Kune yakadzika groove bhora mabheji, kutakura mutoro wakanyanya kudiki panguva yekushanda, izvo zvinokonzeresa kutsvedza pakati pebhora nemujaho, izvo zvinova chikonzero chekukwenya.Kunyanya, hombe yakadzika groove bhora mabhengi ane mabhora anorema nemakeji ane maitiro aya.Muzviitiko zvakawanda, kutakura corrosion kunoitika.Pane zvikonzero zvakawanda zvekutakura corrosion.Zvinhu zvinowanzoitika muhupenyu hwedu hwezuva nezuva zvinonyanya zvinotevera zvinotevera:
1) Kupindirwa nehunyoro uye tsvina nekuda kwehurombo hwekuisa chisimbiso mudziyo;
2) Bearings haisati yashandiswa kwenguva yakareba, kupfuura nguva inopesana ne-rust, kusava nekugadzirisa.
3) Kushata kwesimbi yesimbi yakakura;
4) Kubata necorrosive chemical media, kutakura hakuna kucheneswa, nzvimbo yakasvibiswa netsvina, kana kutakura kunobatwa nemaoko anodikitira.Mushure mokunge kutakura kwacheneswa, hakuna kuiswa mukati kana kuiswa munguva, kuratidzwa kumhepo kwenguva yakareba, uye kunorwiswa nehunyoro hwemhepo.Contaminate
5) Ambient tembiricha uye mwando uye kuonana dzakasiyana siyana zvakatipoteredza midhiya;iyo rust inhibitor inokundikana kana kuti hutano hahuna kusangana nezvinodiwa.
SIZE DIMENSION LOAD RATING Speed ​​​​ratings Kumisa kumhanya
static Reference speed
Zvakapfuura: Spherical Roller Bearings
Zvinotevera: Tapered Roller Bearings
Stainless Simbi Yakadzika Groove Bhora Bearings
Kaviri Row Deep Groove Ball Bearings